Isbedelka cimilada adduunka iyo saamaynta ay ku yeelatay Afrika | Berberanews.com
Home WARARKA Isbedelka cimilada adduunka iyo saamaynta ay ku yeelatay Afrika
Isbedelka cimilada adduunka iyo saamaynta ay ku yeelatay Afrika
Qaaradda Afrika ayaa qaaradaha kale ee caalamka uga nugul isbadalka cimilada ee haatan laga dareemayo adduunka.
Sida ay sheegayaan khubarada cilmi Sayniska, arrintaasi ayaa loo aaneynayaa afar arrimood oo ay ka mid yihii:
Bulshada ku nool Afrika ayay inta badan nolashooda ku tiirsan tahay cimilada maadaama nolasha boqolaal milyan oo qof oo Afrikaan ah ay ku tiirsan tahay roobka.
Cimilada qaaradda oo aan isku mid ahayn aadna u kala geddisan, arrintaa oo sababtay in isbadalka cimilada Afrika laga fisho waxyaabo badan oo la yaab leh.
Heerka isbadalka cimilada ee laga filan karo qaaradda Afrika ayaa ah mid baaxad leh oo ballaaran. Koonfurta iyo woqooyiga Afrika ayaa ah labada meelood ee caalamka oo dhan haatan la filayo in roobabkii ka di’i jiray ay aad u yaraadaan.
Ugu dambeyn, heerka la qabsiga iyo u dulqaadashada isbadalkaasi cimilada ayaa ah mid aad u hooseeyo marka loo fiiriyo dunida inteeda kale; saboolnimo ayaa la degtay dad badan, halka dowladuhuna ay ku guuldareysteen in arrintan isbadalka cimilada ay muhiimad gaar ah siiyaan.
imilada qaaradda Afrika ayaa ah mid aad u kala geddisan oo aan hal dhinac laga eegi karin. Lamadegaanka Saxara ayaa ah lamadegaanka ugu ballaaran caalamka isla markaana ugu kulul caalamka.
Bilihii Juun iyo Luuliyo ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa Afrika waxaa hareeyay cirboor (dabeylo xoogan oo boor iyo qashin wata oo hawada qabsada) kuwaa oo aan lagu arag adduunka intiisa kale balse la rumeysan yahay in cirboorkaasi uu saameyn ku leeyahay cimilada adduunka waloow aan la garan karin saameyntaasi iyo waxa ay tahay.
Laga soo billaabo 1960 waxaa aad u soo yaraanayay roobabka ka da’a qaaradda Afrika, gaar ahaanna waddamada ku yaal saxaraha, arrintaa oo markii dambe sababtay macalluul galaafatay nolasha boqolaal kun oo qof isla markaana ay ku barakeceen malaayiin qof oo kale.
Marka laga soo tago gobolkaasi, wali lama arag abaar sidaa u daba dheeraata dunida inteeda kale.
Dhanka koonfurta qaaradda, waxaa soo baxaya in roobabku ay daaheen iyo in marka ay roobabkaasi da’aan ay noqdaan kuwo aad u yar. Isbadalkaasi ayaa la saadaalinayaa in uu ka sii dari doono tobanaanka sano ee soo socda.
Heerkulka gobolkaasi ayaa la filayaa in uu ilaa shan digrii ama ka badan uu sii sara kaco, gaar ahaanna qaybo ka mid ah Namibia, Botswana iyo Zambia oo haatanba kuleyl ba’an laga dareemayo.
Dhanka kale, waddamada Kenya iyo Tanzania waxaa in badan xilligooga ka soo daahay roobabka guga. Markii ay billowdaannaa waxa ay noqdaan kuwo ka aad u yar. Bartamaha Afrika waxa uu ka mid yahay saddexda gobol ee adduunka ee caanka ku ah roobabka wata Onkodka, waxaana ku yaal keymaha ugu weyn qaaradda oo dhan.
Isbaddalkaasi cimilada Afrika ayaa horseeday duufaannada Idai iyo Kenneth ishii Maarso ku dhuftay waddamada Mozambique, Zimbabwe iyo Malawi. Duufaanta Kenneth ayaa qaaday wado aan laga filayn oo waxa ay martay qeybo ka mid ah dalka Tanzania.
Horumar badan ayaa hadda laga sameeyay saadaasha hawada balse dhibaatadu wali waa mid taagan.
Image captionMore than 1,000 people died after Cyclone Idai hits Mozambique and Zimbabwe
Gobol kastaa oo Afrika ka tirsan waxa uu leeyahay cimilo u gaar ah, taa oo dhibaato ku noqonayso saadaalinta iyo in la sii ogaado waxa soo socda.
Waxaa mararka qaar dhacaya in roobabku ay xilli yar da’aan balse ay sababaan dhibaato aad u badan ama in ayba noqdaan kuwa yar oo abaaro ay xigaan.
Previous articleHargeysa: Ilmo sagaal bilood jiray oo ku naf waayay dab
Next article” Wakaalada Biyaha Waxaa La Cunayaa Oo La Masaariifsadaa Wax la dhaho Biyo Balaadhin Oo Socota Uun ” Siro Badan Oo La Fashiliyay